पाँचतारे होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत | गृहपृष्ठ
Home बजार पाँचतारे होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत
पाँचतारे होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत
जेठ १, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ को पहिलो चार महीनामा पाँचतारे होटलको अकुपेन्सी करीब ८० प्रतिशत रहेको छ । ‘पर्यटन वर्षशुरुआतका चारै महीना होटलको अकुपेन्सी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै राम्रो देखिएको होटल साङ्ग्रिलाका वरिष्ठ महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘पाँचतारे होटलको चार महीनाको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत रहनुभनेको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले बढ्नु पनि हो ।’
पदयात्रा तथा पर्वतारोहण पर्यटनको सिजन (वसन्त ऋतु) चलिरहेकाले केही होटलको अप्रिल महीनाको अकुपेन्सी ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको पनि बताइएको छ । शाहले पर्यटन वर्षमा कार्यक्रम र उत्साहका कारण अहिलेको समयमा होटल पूरै भरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । तर, गत वर्षको तुलनामा सन् २०११ का सबै महीनामा होटल अकुपेन्सी बढेकाले आगामी महीनामा पनि यसले निरन्तरता पाउने होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
होटल याक एण्ड यतीका बजार निर्देशक भरत जोशीका अनुसार पनि पदयात्रा तथा पर्वतारोहण पर्यटनले गति लिन थालेकाले होटलको अकुपेन्सी बढेको हो । नेपालमा आउने चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो सङ्ख्याले पनि होटल अकुपेन्सी बढाउन सहयोग गरेको उनले बताए । जुनदेखि कैलाश मानसरोवरको धार्मिक यात्राको सिजन शुरू हुने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या अझ बढ्ने होटल व्यवसायीहरूको आशा छ । ‘यसले होटल व्यवसायलाई निकै उत्साहजनक बनाएको छ’, जोशीले भने ।
सन् २०११ को अप्रिल महीनामा होटल साङ्ग्रिलाको ८७, होटल याक एण्ड यतीको ७९, होटल सोल्टीको ७८ र होटल फूलबारीको करीब ८० प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको छ । सन् २०१० को अप्रिलमा साङ्ग्रिलाको ८३ र याक एण्ड यतीको ७० प्रतिशत होटल अकुपेन्सी रहेको थियो । अन्य पाँचतारे होटलले समेत सन् २०१० को अप्रिल महीनाको अकुपेन्सी करीब ७५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका छन् ।
होटल सोल्टीमा गत वर्षको तुलनामा सन् २०११ को चार महीनामा १२ प्रतिशतले माइस पर्यटक बढेको होटलका एशोसिएट प्रबन्धक साम्बाविक्रम शाहले जानकारी दिए । उनले आफ्नो होटलको अकुपेन्सी बढ्नुमा पहिलो कारण माइस पर्यटन नै भएको बताएका छन् । होटलमा गत वर्षको तुलनामा माइस पर्यटनकै कारण करीब १० प्रतिशतले अकुपेन्सी बढेको उनले बताए । होटलले पर्यटन वर्षप्याकेज ल्याएको र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकाले अकुपेन्सी बढेको होटल फूलबारीका एशोसिएटेड निर्देशक माधव ढकालले बताए ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रचार-प्रसार गरी पर्यटक बोलाउनुपर्ने भए पनि होटल आफैले गरेको प्रचारबाट मात्र होटल अकुपेन्सी बढेको पाँचतारे होटलहरूले दाबी गरेका छन् । गत वर्षको अप्रिल महीनाको तुलनामा यस वर्ष पर्यटक आगमन आशालाग्दो भए पनि पर्यटन वर्षमा प्रवर्द्धनका लागि भएका सरकारी प्रयासको प्रभाव भने नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पाँचतारे होटलहरूले विभिन्न मुलुकमा प्रचारप्रसारमा वार्षिक रू. ४० करोडभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको पनि बताएका छन् ।
कृषि विकास बैङ्कको उपशाखा पुन:स्थापना
जेठ १ , पर्वत (अस) । पर्वतको दुर्गम गाउँ हुवासमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएको कृषि विकास बैङ्कको उपशाखा १० वर्षपछि पुन:स्थापना भएको छ । दक्षिण पर्वतका डेढ दर्जनभन्दा बढी गाविसमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उपशाखा असुरक्षाका कारण विसं. २०५८ असार मसान्तमा सदरमुकाम कुस्मा बजार सारिएको थियो ।
सञ्चालन गरेलगत्तै बैङ्कमा स्थानीयवासीको भीड लाग्न थालेको छ । ‘स्थानीयवासीको पटकपटकको मागपछि बैङ्कको उपशाखा पुन:स्थापना गरेका हौं,’ शाखा प्रबन्धक ज्ञानप्रसाद अर्यालले भने, ‘अहिले दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी ग्राहकहरू आउन थालेका छन् ।’ शान्ति स्थापनपछि पनि लामो समयसम्म शाखाको पुन:स्थापना नहुँदा स्थानीयबासिन्दाहरू बैङ्किङ सेवाका लागि स्याङ्जा, पोखरा, पाल्पा तथा सदरमुकाम कुस्माबजार धाउन बाध्य थिए । अहिले निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, चेक भुक्तानीलगायत सुविधाहरू सुचारु भइसकेको बैङ्कले बताएको छ । त्यस्तै, रेमिटयान्स सेवा पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने अर्यालले बताए । द्वन्द्वका क्रममा दक्षिण पर्वतको हुवास गाविसमा स्थापना भएको नेपाल बैङ्क लिमिटेडको शाखा पनि अझैसम्म पुन:स्थापना हुन सकेको छैन ।
वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरू
जेठ १, काठमाडौं (अस) । युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरका पसलहरू ‘फिक्स् प्राइस’मा जाने उपलक्ष्यमा आयोजित ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर’ वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरमा आइतवारदेखि शुरू भएको छ । वेलनेस अस्पतालको प्राविधिक सहयोग तथा डीआईसीसीको सहकार्यमा युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर व्यापार सङ्घले शिविरको आयोजना गरेको हो । ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त शिविरको व्यवस्थापनमा रोटर्‍याक्ट क्लब अफ चारुमतीले पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापी, अकुपञ्चरलगायत सेवाहरू उपलब्ध गराइने आयोजकले बताएको छ । सो शिविरमा शरीर दुख्ने, नशा च्यापिएको, बाथ, हड्डी खिइएको, युरिक एसिड, प्यारालाइसिस, माइग्रेन, पिनास, ग्याष्ट्रिकलगायत विभिन्न रोगको उपचार गरिने वेलनेस अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन बस्नेतले बताए । शिविर अवधिभर २ सय जनालाई त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने आयोजकले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरका ग्राहक तथा स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीद्वारा सरकारसँग छुट्टै सुरक्षा योजना ल्याउन माग जेठ १, नवलपरासी । उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना ल्याउन नवलपरासीका व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको आयोजनामा शनिवार सुनवलमा सम्पन्न जिल्लाका उद्योगी व्यापारीहरूको बृहत् भेलाले यस्तो माग गरेको हो । मुलुकका उद्योगी व्यवसायीमाथि चन्दा आतङ्क, धम्की, हत्यालगायत घटना कायमै रहेकाले सरकारसँग छुट्टै सुरक्षा योजना ल्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
भ्याली फाइनान्सको निक्षेप बीमा
भ्याली फाइनान्स लिमिटेडले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग निक्षेपको बीमा सम्झौता गरेको छ । फाइनान्सले रू. २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गरेको हो । सम्झौतापत्रमा फाइनान्सका प्रबन्ध निर्देशक सुधीरकुमार रेग्मी र निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्माले आइतवार हस्ताक्षर गरेको फाइनान्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
असुसको डिलर मिट सम्पन्न
जेठ १, काठमाडौं (अस) । असुस ब्राण्डको अधिकृत विक्रेता नागमणि इण्टरनेशनलले डिलर मिट २०११ कार्यक्रम गरेको छ । राजधानीको र्‍याडिसन होटलमा सम्पन्न भएको डिलर मिटमा नेपाल र बङ्गालादेशका असुसका डिलरहरू सहभागी भएका थिए । बङ्गलादेशबाट मात्र ४० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा डिलर सहभागी भएका थिए ।
डिलर मिटमा आसुसका क्षेत्रीय निर्देशक (भारत तथा सार्क क्षेत्र) अर्ल्बट टुङले सम्बोधन गरेका थिए । टुङले असुस ब्राण्ड यस क्षेत्रमै लोकप्रिय रहेको र केही वर्षमै यस क्षेत्रकै नम्बर एक ब्राण्ड बन्ने बताए । कार्यक्रममा आसुसका विक्रेतालाई प्रमाणपत्र तथा अवार्ड वितरण गरिएको थियो । विक्रेताहरूलाई ‘आउटष्टयाण्डिङ सेल्स पफर्मेन्स’, ‘सेल्स पफर्मेन्स’, ‘एचिभमेण्ट अफ द सेल्स टार्गेट’लगायत अवार्ड तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न संस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा असुस ब्राण्डका उत्पादनहरूका बारेमा जानकारीसमेत दिइएको थियो । नागमणि इण्टरनेशनले नेपालमा असुस ब्राण्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । असुस यस क्षेत्रकै एक नम्बरको नोटबूक ब्राण्ड हो । असुसले कम्प्युटर, ल्यापटप र मनिटर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कार्यक्रममा नागमणि इण्टरनेशनलका निर्देशक अमित सराफले असुसको प्रवद्धनमा सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
बीमा कम्पनीले दीर्घकालीन लगानीको अवसर पाउनुपर्छ : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले पनि दीर्घकालीन लगानीको अवसर पाउनुपर्ने बताएका छन् । बीमा समितिको ४२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गभर्नर खतिवडाले उक्त कुरा बताएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले अहिले दीर्घकालीन लगानीको अवसर पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले ऋणपत्रमा समेत लगानी गर्न पाउनुपर्ने गभर्नर डा. खतिवडाको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूबाट आउने प्रतिफल सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले कम नभएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका अर्का सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए । बीमा गराउने विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ । नेपालका सीमाक्षेत्रमा भारतीय बीमा कम्पनीहरू आएर काम गरिरहेको भन्ने समाचार आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता कम्पनीहरूले काम गरेको नपाएको उनले बताए ।
कंसाकारको हाजिरी निगममै
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारीविना नै निगममा हाजिरी गर्न दिइने भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयाट कंसाकारलाई निगममा नै हाजिरीको निर्देशन दिइने भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले सोमवार आधिकारिक पत्र दिने मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिए ।
जहाज खरीद बैना रकम पठाउँदा भष्टाचार भएको भन्दै निलम्बनमा परेका कंसाकारलाई विशेष अदालतले गत वैशाख ७ गते सफाइ दिएपछि कंसाकार पुन: निगममा हाजिर भएका थिए । कार्यकारी अध्यक्ष रहेका कंसाकार निलम्बनमा परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन सचिव किशोर थापालाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयनभएसम्म कंसाकारले प्रशासनिक जिम्मेवारी नपाउने तर निगममा हाजिर भने हुन पाउने भन्दै पर्यटनले सोमवार पत्र दिने भएको भण्डारीले बताए । कंसाकार निलम्बनमा परेकाले उनको कुनै भूमिका र पद नभएको भन्दै निगमका महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले दुई साता अगाडि उनको कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि कंसाकार कार्यालय गएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार कंसाकार सोमवारबाट नै हाजिर हुनेछन् ।
घरभाडासम्बन्धी छलफल सम्पन्न
उद्योग वाणिज्य सङ्घ-चितवन तथा भरतपुर नगरपालिकामा भाडमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी तथा नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चबीच घरभाडासम्बन्धी छलफल भएको छ । उक्त छलफलले घरधनी र भाडामा बस्नेबीच पहिले नै भाडा तथा समयावधिसम्बन्धी करार गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । करारमा समयावधि, मासिक भाडा, भाडा बढ्ने प्रक्रिया, घरभाडा करलगायतका बारेमा उल्लेख गरिनुपर्ने छलफलले जनाएको छ । यसले घरधनी र भाडावालबीचको समस्या सामधान हुने बताइएको छ ।
‘सिक्स सिग्मा एलो वेल्ट सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण’ सम्पन्न
मानव संसाधनको क्षेत्रमा कार्यरत ग्रोथ सेलर्सले आयोजना गरेको ‘सिक्स सिग्मा ऐलो वेल्ट सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण’ आइतवार सम्पन्न भएको छ । होटल हिमालयमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रशिक्षणमा इन्षिटच्युट अफ सिग्मा लर्निङका प्रशिक्षक डा. आरएस चालापाथीले प्रशिक्षण दिएका थिए । उक्त अवसरमा सिक्स सिग्मा एक अत्याधुनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार भएको बताइएको थियो । यसको प्रयोगबाट उत्पादनमा वृद्धिका साथै लागतमा कमी हुन गई सङ्गठनलाई हुन सक्ने नोक्सानीमा समेत कमी ल्याउने बताइन्छ । त्यसैले, नेपालमा पनि यसको प्रयोगलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका ३५ जना उच्च व्यवस्थापको सहभागिता थियो ।
जङ्गल सफारी लजमा सेमिनार हल
सौराहाको जङ्गल सफारी लजले सेमिनार हल सञ्चालनमा ल्याएको छ । विभिन्न सभा, सेमिनार, तालीमलगायत कार्यक्रमहरू गर्नका लागि अत्याधुनिक हल सञ्चालनमा ल्याएको होटलले बताएको छ ।
सौराहामा अत्याधुनिक सेमिनार हल भएको होटलहरू न्यून छन् । ‘सौराहामा सबै किसिमका पर्यटकहरू आकर्षण गर्न अत्याधुनिक हल निर्माण गरेका हौं,’ होटेलका विक्री तथा बजार निर्देशक सुमन घिमिरेले भने, ‘हामीले रेसिडेन्सियल सेमिनारसमेत गर्छौं ।’ उनका अनुसार पूरै दिन सेमिनारका लागि प्रतिव्यक्ति ७ सय ५० रुपैयाँ र हल भाडा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । होटेलले यो प्याकेजमा दुईपटक चिया, कफी र बफेट लञ्च दिन्छ । त्यस्तै, आधा दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय ३० रुपैयाँ र हल भाडा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आधा दिनको यो प्याकेजमा चिया र बफेट लञ्च उपलब्ध हुने होटलले बताएको छ । होटेलले रेसिडेन्सियल सेमिनारका लागि भने प्रतिव्यक्ति २ हजार २ सय ९९ सय रुपैयाँ लिने बताएको छ । यसमा एकरातको बसाइ ब्रेकफाष्ट, लञ्च र डिनर समेटिएको घिमिरेले बताए । त्यस्तै, दुई रातको रेसिडेन्सियल सेमिनारका लागि भने प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ पर्दछ । यस्तो प्याकेजमा चारपटक चिया, कफी, ब्रेकफाष्ट, लञ्च, डिनर समेटिएको घिमिरेले बताए ।
दृष्टि एकेडेमीको शुभारम्भ
दृष्टि प्रोफेशनल एकेडेमी प्रालि आइतवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । पुल्चोकस्थित एकेडेमीले बैङ्किङ सूचनाप्रविधि र कम्प्युटरसम्बन्धी विभिन्न तालीम दिनेछ । शुभारम्भका अवसरमा कम्पनीले ‘वित्तीय पहुँचको सुधारीकरण: अबको बाटो’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा बोल्दै मेगा बैङ्क नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रीत ट्रयाक्टरको शो-रूम धनगढीमा
प्रीत ट्रयाक्टरले सुदूरपश्चिमाञ्चलमा आफ्नो पहिलो शो-रूम स्थापना गरेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलको महाकाली र सेती अञ्चलका लागि प्रीत ट्रयाक्टरको आधिकारिक विक्रेता ठाकुर ट्रेड लिङ्कले धनगढीमा उक्त शो-रूम स्थापना गरेको हो । ढुवानीमा ट्रयाक्टरको प्रयोग बढेकाले प्रीत ट्रयाक्टरको शो-रूम स्थापना गरेको ठाकुर ट्रेडले बताएको छ । कम्पनीले तराई क्षेत्रका लागि ४५ हस पावरको ट्रयाक्टर उपलब्ध गराउने भएको छ । यसको मूल्य ११ लाख ४ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रका लागि भने ५० र ६० हस पावरका ट्रयाक्टरहरू उपलब्ध गराइने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार बजारमा उपलब्ध ५० हसपावर प्रीत ट्रयाक्टरको मूल्य १२ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ६० हसपावरको मूल्य भने १३ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
तिनाउका सञ्चालक चयन
तिनाउ विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा शेयरधनीका तर्फबाट अनिलप्रसाद श्रेष्ठ र रविनसन कक्षपति निर्वाचित भएका छन् । शनिवार सम्पन्न बैङ्कको चौथौ वार्षिक साधारणसभाले श्रेष्ठ र कक्षपतिलाई सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । उक्त साधारणसभाको अवसरमा बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालायलाई बुटवल ८, हस्पिटललाइनमा सार्ने, एटीएम, एसएमएस तथा इण्टरनेट बैङ्किङ सेवा शुरू गर्ने तथा विभिन्न नयाँ शाखाहरू विस्तार गर्ने निर्णयगरेको छ ।
दियालो बैङ्क चरिकोट शाखाको सेवा शुरू
दियालो विकास बैङ्कले दोलखा जिल्लामा शाखा स्थापना गरेको छ । सदरमुकाम चरिकोटमा स्थापना भएको शाखाले बिहीवारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा शुरू गरेको हो । यसको उद्घाटन भने जेठको दोस्रो हप्ता गरिने बैङ्कले बताएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा मुख्य कार्यालय रहेको दियालो विकास बैङ्कले आगामी वर्षमा कास्की, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्लामा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
वस्तुगत तथा उपसमितिको भेला सम्पन्न
उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चितवनअन्तर्गतको वस्तुगत सङ्घ-उपसमिति समन्वय समितिको आयोजनामा ‘वस्तुगत सङ्घ-उपसमितिको भेला तथा छलफल कार्यक्रम’ गत शनिवार सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष उत्तमलाल चुकेले लामो समयसम्म उपसमितिमा रहँदै आएका व्यवसायीको समूहलाई पनि यथाशीघ्र वस्तुगत सङ्घका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने बताए । वस्तुगत सङ्घ-उपसमितिको छलफल ३/३ महीनामा हुने गरेको छ ।